झुक्किएर पनि घरमा राख्न नहुने यी चिजहरु, आजै हटाईहाल्नुस् – Suchana Hub
झुक्किएर पनि घरमा राख्न नहुने यी चिजहरु, आजै हटाईहाल्नुस्
काठमाण्डौ । वास्तुशास्त्र अनुसार घर बनाउँदा र सजाटव गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले मात्र नभएर वैज्ञानिक रुपमा समेत पुष्टि भइसकेको छ । घरमा के राख्ने र के नराख्ने भनेर पनि मानिसहरु प्राय वास्तु अनुसार नै पालन गर्ने गर्दछन्। हाम्रो घरमा हुने कति चिज यस्ता हुन्छन जसमा हाम्रो खासै ध्यान गईरहेको हुँदैन र तिमध्य केहि चिजले हाम्रो घरमा अशुभ गराईरहेको हुन्छ। आखिर के के हुन् ति चिज जसलाई घरमा राख्दा अशुभ मानिन्छ?
माकुराको जालो : यदि घरमा माकुराले जालो लगाएको छ भने त्यसलाई तुरुन्त हटाउनुस् । किनकी वास्तुशास्त्र अनुसार माकुराको जालो भएको घरमा गरीबी बढ्छ । यतिमात्र नभई माकुराको जालोले संकट समेत निम्त्याउँछ । परेवाको गुँड : परेवालाई घरमै पालेर पनि राख्ने गरिन्छ । तर, वास्तुशास्त्रले भने घरमा परेवाको गुँड हुनुलाई शुभ मान्दैन । घरमा परेवाको गुँड हुनाले घरको शान्तिस्थिति बिग्रिने र परिवारमा फाटो ल्याउने वास्तुशास्त्रले बताउँछ। चर्केको भित्ता : तपाईंको घरको भित्ता चर्केको छ भने पनि तुरुन्तै मर्मत गर्नुहोस् । वास्तुशास्त्र अनुसार, त्यसले तपाईंको परिवारमा गरीबी बढाउँछ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
चमेराको गुँड : घरमा चमेराले गुँड लगाएको छ भने पनि देख्नेवित्तिकै हटाइहाल्नुस् किनकी तपाईंको घरमा चमेराको गुँड छ भने तपाईंले सुरुवात गरेको नयाँ काममा त्यसले बाधा पुर्याउँछ। फुटेको ऐना : घरभित्र फुटेको ऐना झुण्डयाउनु वा राख्नु पनि वास्त्रु शास्त्र अनुसार निकै अशुभ मानिन्छ । किनकी फुटेको ऐनाले घरमा गरीबी निम्त्याउनुका साथै अनिकाल समेत निम्त्याउन सक्छ । चुहिने धारो : घरमा चुहिने धारो छ भने पनि त्यो अशुभको संकेत हो । वास्तुशास्त्र अनुसार त्यसले सकारात्मक उर्जा जति बाहिर चुहिएको संकेत गर्छ । त्यसैले घरमा चुहिने धारा छ भने तुरुन्त त्यसलाई मर्मत गर्नुहोस् ।
Previous आज आइतबार : के गर्ने, के नगर्ने ?
Next यसकारण बस्नुपर्छ सोमबारको व्रत, पुरा पढ्नुहोस